Saffron - Khamriga ugu qaalisan adduunka iyo waqti isku mid ah daaweyn
Saffron | Kalluunka intaad cunto karineysid
Awoodda bogsiinta ee xayawaanka - khuraafaadka iyo riyada
Saffron sidoo kale waxaa loo yaqaan boqorka boqorka. Sababta oo sabab la'aan ah, sababtoo ah tani waa qiimaha ugu qaalisan adduunka. Waxaa laga helaa ubaxa geedka "Crocus Sativus". Kaliya sadax shandadood ayaa laga goyn karaa ubax.
Saffron - Baahiyaha ugu Badan Dunida iyo Lacagaha
Wixii beergooyska hal kilo oo huruud ah, ilaa dhirta 200.000 ayaa loo baahan yahay.
Inta badan daawada qaaliga ah ee adduunka - laga helo Crocus sativus
Maadaama moobaha aan laga soo saari karin mashiinka, halkan waxaa lagu dhawaaqay shaqeyn qalabaysan. Halkaas waxaa ku jira sababaha qaaliga ah ee bahalka this.
Saffron waxaa horay loogu soo sheegey qoraallada Giriigta. Legend wuxuu leeyahay in Zeus jiifsaday sariirta of this khasnadda this. Halyeeyada tira badan ayaa ku wareegsan boqorka xawaashka, laakiin gurigooda bogsiinta ayaa si wanaagsan loo yaqaan oo loo mahadnaqaa.
Goobaha beeraha iyo qaybinta xumbada
Waxaa la rumeeysan yahay in dhirta laga soo gooyey Crete-gii hore ay ku fidi doonto dunida oo dhan. Bayaan ammaan ah oo la xidhiidha waddanka asal ahaan lama yaqaan. Tan iyo dhirta jilicsan ee jecel xaaladaha cimilada gaar ah, sacfraan ma kori karo meel kasta oo adduunka ah.
Maanta meelaha ugu muhiimsan ee koraya ayaa ku yaal Iran. Hindiya iyo Giriigga ayaa ah meelaha kale ee wax soosaaraya. Ilaa xadkeedu aad u yar yahay, bahalka waxaa lagu beeray Morocco iyo Spain. Tirada halkan waa mid yar oo leh qiyaasta 1,3 sanadkiiba. Yurubta dhexe waxay sidoo kale ku faani kartaa meelaha sii kobcaya. Tusaale ahaan, saffroner saffron iyo saffron pannonian waxaa lagu beeray Awstaria. Gaar ahaan xiiso leh waa tuulada yar ee Mund ee Switzerland. Halkan, dhirta qaaliga ah ee buuggan waxaa lagu koray aag ah oo ku saabsan mitirka labajibbaaranaha 2.500. Marka goosashada la arko, tuulada oo dhan waxay isu yimaadaan si ay u qaataan.
Warshadda waxaa loo aanaynayaa awoodaha bogsashada, wuxuu ahaa geedka Giriigga ah sida awooda la xaqiijiyay. Waagii hore waxaa la sheegay in sacfraan loo qoondeeyey kaliya ilaahyada iyo boqorada. Waxay dharbaaxay dhar ay ku quraacsan yihiin sacfraan.
Baadhitaanka waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay hemostatic, dib u soo kabashada iyo xoojinta dareemayaasha. Midabada shaambada waxaa loo isticmaalaa daawada dabiiciga ah ee China (TCM), laakiin sidoo kale naturopathy gudaha. Intaa waxaa dheer, sacfraan waxaa loo tixgeliyaa mucjiso qurux badan. Nacfaan ayaa laga samayn karaa nambarada shaashadda iyadoo lagu darayo dhir udgoon iyo jajabyo kale.
Warshad waxaa lagu qiimeeyaa sida bahal yar ee dhadhanka tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah. Isticmaal badan, waxay siisaa cunto taabasho gaar ah iyo midab guduudan.
Qaxwaha - geedo deegaanka ah markaad cunto karineyso
Turmeric | Kalluunka cuntada
Taariikhda Rootiga | Karinta dubista